Jikada jikada leh hansgrohe: Mustaqbalka shaqo socodsiinta caqliga leh ee leh Aquno Xulo M81 - Macluumaadka-Jikada Qasabadaha, Tuunbooyinka Filinka Dheriga, Qasabadaha Musqusha | WOW
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Kushiinka leh hansgrohe: Mustaqbalka shaqa caqli-gal ah oo leh Aquno Xulo M81 - Macluumaad
2020 / 09 / 11 QoondayntaTilmaamaha qasabada 1951 0
Iyada oo cusub Aquno Select M81 qasabada jikada, hansgrohe waxay soo bandhigeysaa nidaam isku dhafan oo cusub oo ka kooban naqshad alaab aan caadi aheyn oo lagu soo daray tikniyoolajiyad cusub oo buufin leh iyo qalabyo gaar ah - oo loogu talagalay kuugga hamiga leh iyo kuwa jecel cuntada ee karinta ay ka badan tahay kaliya diyaarinta cuntada.
Nidaamka isku dhafan ee Aquno - oo loogu magac daray "aqua" iyo "unit" - wuxuu suurta gal ka dhigayaa in lala kulmo nooc cusub oo is dhexgal ah biyaha jikada; mahadnaqna fikradeeda isku dhafan ee caqliga badan, waxay leedahay qaabab buufin iyo shaqooyin ku habboon hawl kasta oo gacanta ku haysa.
Markii ugu horreysay abid, hababka laminar-ka iyo buufinta qaababka lagu buufiyo hoos-u-buuxinta waxaa lagu kabayaa seddexaad, qaab fidsan iyo gaar ahaan tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ah leh ah, oo ka soo qulqulaya qaybta saldhig ee isku dhafan.
Habka lagu buufiyo SatinFlow wuxuu ka kooban yahay diyaarado shaqsiyadeed oo badan oo sameeya qulqulaya laminar jilicsan oo haddana cufan. Buufintu waa mid aan ku buufin waxayna hubisaa in biyuhu si siman ugu dul socdaan cuntada, gacmaha iyo walxaha. Waxsoosaarka jilicsan sida khudradda, khudradda iyo cagaarka saladku waxay jecel yihiin qasabadda, sidoo kale waxay jecel yihiin dadka jecel jikada.
Ku dhaqid jilicsan: Hansgrohe cusub Aquno Xulo M81 qasabadda qasabadda ayaa ku riyaaqaya qaabkeeda buufin ee jilicsan ee SatinFlow ah. (./.)
All-in-one oo loogu talagalay habsami u socodka shaqada saxanka
Hansgrohe Aquno Xulo M81 tuubada jikada ayaa ku riyaaqeysa qaabkeeda buufin ee jilicsan ee SatinFlow, oo ah mid ugub ku ah warshadaha jikada. Qaybta aasaasiga ah ee ka samaysan qaybta hoose ee qasabadda ayaa u shaqeysa sidii "maydhasho" loogu talagalay khudradda iyo khudradda: Duufkeedu waa dherer yahay oo cidhiidhi yahay wuxuuna soo saaraa qulqul ballaaran oo biyo ah.
Waad ku mahadsan tahay heshiis cusub iyo tirooyin buufis ah, hansgrohe Aquno Select M81 sidoo kale wuxuu hubiyaa qaybinta jilicsanaanta jilicsan ee dhibcaha. Tan macnaheedu waa in cuntada si fiican oo dhaqso badan loo dhaqi karaa. Iyada oo shaandheeyaha waxqabadka badan leh, ee ku jira go'an oo loogu talagalay inay si fiican ugu haboonaato buufin ballaadhan, nidaamka tuubada ayaa hubisa hawl socodsiin fudud oo hufan weelka saxanka.
Xitaa walxaha waaweyn, sida go'yaasha wax lagu dubo, ayaa lagu dhaqi karaa qulqulka ballaaran, maadaama ay gebi ahaanba ku daboolayso biyo; iyo SatinFlow waa keyd aad u kheyraad badan maadaama isticmaalka biyaha uu yahay kaliya 4 litir daqiiqadii.
Diyaaradda laminar ee buufinta soo jiidanaysa waxay leedahay qulqulka socodka oo ah 7 litir daqiiqaddii, taas oo ka dhigaysa mid suurtagal ka dhigaysa in si dhakhso leh loo buuxiyo dheriyo gacmahana dhaqso loo dhaqo iyadoon biyo la lumin; iyo qaabka hoos u dhaca awgood, qaabka buufisku wuxuu ku habboon yahay in lagu mayro cunnooyinka aadka u adag iyo weelka lagu dhaqo inta u dhexeysa isticmaalka.
Qiyaasta hoos u soo jiidanaysa ee buufinta illaa 76 sentimitir ayaa sidoo kale bixisa xorriyadda dhaqdhaqaaqa, taasoo u oggolaanaysa qasabadda in loo isticmaalo meel ka fog saxanka. Tani waxay fududeyneysaa, tusaale ahaan, in lagu buuxiyo biyaha mashiinka kafeega ah oo aad u fog.
Xatooyo nalka: Ujeedadiisa mustaqbal iyo xad-dhaafka ah iyo xulashada qaababka aasaasiga ah waxay ka dhigayaan hansgrohe Aquno Xulo M81 il-qabad dhab ah oo ku milma shaqsi kasta iyo jawiga jikada ee casriga ah. (./.)
Hawlo badan oo biyo ah
Fududeynta qasabadu sidoo kale waa mid wacdaro leh iyadoo ay ugu wacan tahay naqshadeynta caqliga leh iyo dusha si fudud loo nadiifin karo Kalilaha kabaalka midig ee gacanta midig ee salka tubbada iyo badhanka xulashada bidix wuxuu siiyaa dadka isticmaala ku habboon iyo dareen macquul ah dhammaan muuqaalada M81.
Naqshadeynta mustaqbal iyo xad-dhaafka ah iyo xulashada qaababka aasaasiga ah waxay hansgrohe Aquno Select M81 u tahay il-qabsi dhab ah oo ku milma shaqsi kasta iyo jawiga jikada ee casriga ah. Mid ka mid ah noocyada kala duwan ayaa qumman oo leh lakab L-qaabeeya. Tuubada xagjirka ah ee xagjirka ah waxay muujineysaa naqshadda saxda ah ee tooska ah ee alaabta guud waxayna soo bandhigeysaa waxqabad hoos u dhigaya oo leh diyaarad laminar ah.
Nooc kale oo ka mid ah M81 wuxuu soo bandhigayaa qulqulo qulqulaya oo aad u sarreeya oo xoojinaya iskudhafka monolithic ee qaababka qaababka iyo wareegyada. Madaxa buufiska soo jiidaya wuxuu leeyahay noocyo diyaaradeed oo la hagaajin karo, oo awood u siinaya isticmaalka biyaha ee rogrogmi kara.
Isha Warka by wowowfaucet
Hore:: Qiyaasta Suuqa Weelasha Qasacadaha iyo Saadaasha (2020-2027) Next: Qalabka musqusha ee hore u wasakhaysan ka dhig mid cusub | Guryaha Siouxland
2021 / 05 / 13 2331
2021 / 05 / 09 1636
2021 / 05 / 08 1472
2021 / 02 / 04 1307
2021 / 02 / 03 1308
2021 / 02 / 03 1278